Akụkọ gam akporo: hapụ, akụkọ, asịrị na ndị ọzọ! | Gam akporo (Peeji nke 14)
Onye enyemaka Google na Spanish na ngwaọrụ gam akporo TV
Chọpụta karịa maka mbata nke Google Assistant na ngwaọrụ nwere gam akporo TV, na nwelite nke na-agbasawanye.
Ofgwọ nke ekwentị mkpanaaka ga-abawanye na Spain site na canon dijitalụ ọhụrụ
Chọpụta ihe banyere ịrị elu ọnụ ahịa ekwentị na Spain n'ihi canon dijitalụ ọhụrụ nke dị ugbu a.
Nokia 7 anatala mmelite ya na Android 9.0 Pie na China na nso nso a. Anyị na-agbasa nkọwa!
Mmepụta onwe gị iji ghọọ Genatar na Genies
Genies bụ ngwa na-enye gị ohere iji mmepụta onwe gị wee ghọọ avatar. Echere m, a ...
Vivo Nex Dual Ngosipụta: Ekwentị ọhụụ ọhụụ
Chọpụta ihe banyere Vivo Nex Dual Display, ekwentị ọhụrụ nwere ihu abụọ na igwefoto atọ site na akara ndị China, ewegoro,
OnePlus 6T ahịa gafere OnePlus 6 site na 249%
Ahịa nke OnePlus 249T amụbawo site na 6% ma e jiri ya tụnyere OnePlus. Nnukwu ihe ịga nke ọma iji nwee ike ịrịda na United States.
Nweta ego efu na Amazon Prime site na ịge egwu
Choputa nkwalite a na Amazon Prime ekele nke ị na-ebelata ego 3 euro na ụlọ ahịa maka ị na-ege egwu.
ZTE weputara uzo ohuru nke Nubia X nke nwere 512 GB ebe nchekwa, ya bu ndi nchikota ndi mmadu.
Edere Nubia X Collectors Edition na China site na iji 512GB nchekwa dị n'ime ya na ụdị agba ọhụụ.
Honor V20 ga-abịa na igwefoto azụ megapixel 48
Ekwenyere na Honor V20 ịbụ ekwentị izizi nke ụwa jiri igwefoto nwere megapixel 48 bịa, ọ ga-abụ na Disemba 26.
Vivo Y93s: atụmatụ, nkọwa, ọnụahịa na nnweta nke etiti ọhụụ ọhụrụ emepere
Emeela Vivo Y93s ka ọ bụrụ onye isi na China dị ka etiti na Mediatek's Helio P22 na ndị ọzọ. Mara ihe niile banyere ya.
Japan kpebiri na Mọnde iji wepu Huawei Technologies na ZTE site na ịchụpụta ọha nke ọrụ 5G nke mba ahụ.
Samsung Galaxy A7 (2018) ka pụtara na Geekbench na-agba ọsọ na gam akporo 9.0 achịcha. N’oge na-adịghị anya, m ga-enweta mmelite ahụ.
Huawei P Smart (2019) na-egosi na Geekbench ya na gam akporo
Huawei P Smart (2019) gafere Geekbench ya na gam akporo 9.0 achịcha dị ka sistemụ arụmọrụ. Mụta nkọwa nke mkpọpu mmiri a.
Hisense na-edebanye aha ọhụrụ na TENAA: ndị a bụ njirimara ya na nkọwa ya
Hisense nwere ike ikwuputa smartphone ọhụụ n'oge adịghị anya, dịka ndepụta ọhụrụ pụtara na weebụsaịtị TENAA.
Samsung Galaxy A8s gbaara na TENAA nwere 8 GB nke RAM yana igwefoto atọ
Samsung TXAA kwadoro Samsung Galaxy A8s. Edere ọtụtụ nkọwa ya na ndepụta ahụ, dịka 8 GB nke RAM na igwefoto atọ.
Kwenyesiri ike: OnePlus 6T McLaren Edition ga-enwe 10 GB nke RAM na teknụzụ na-agba ngwa ngwa
Ntughari ohuru na-egosi na OnePlus 6T ga-adaba n'ahịa ya na 10GB nke RAM na teknụzụ ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa karịa nke mbụ OnePlus 6T.
Vivo Nex 2 Leaks na Geekbench n'ihu nke Mwepụta: SD845, 10GB RAM na More Data gosipụtara
Vivo Nex 2 na-abanye na Geekbench yana isi nkọwapụta ya na atụmatụ ya. Anyị na-agbasawanye gị!
OPPO ga-ewebata teknụzụ SuperVOOC ngwa ngwa ngwa ngwa ndị ọzọ
Chọpụta ihe banyere ikikere nke na-enye ohere maka SuperVOOC, OPPO na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa iji ụdị ndị ọzọ rụọ ọrụ na gam akporo.
Samsung na-ekpuchi ngosipụta nke ihe ngosi maka ekwentị n'ọdịnihu na-enweghị bezels
Ihe omuma ohuru Samsung putara. Nke a gụnyere ndebanye ekwentị na-enweghị ihe ọ bụla. Ihuenyo na-egosi na-emikpu onwe ya.
Official: a ga-ebido Vivo Nex 2 na Disemba 12
Vivo na-akwadebe ịmalite Vivo Nex 2, ekwentị nke ga-aga nke ọma na ọkwa ya ugbu a. Ihe omume mmalite ga-abụ na December 12.
A ga-ekwupụta ụdị 5G nke Nubia X na Disemba 10
Nubia ga-eweta mbipụta 5G nke Nubia X na Disemba 10, dị ka akwụkwọ ọkwa gọọmentị nke CEO gosipụtara n'oge na-adịbeghị anya.
PUBG Mobile mbipute 0.10 ga-abata na Disemba 20 na map ọhụrụ Virkendi snow
Otu ụbọchị nke ozi ọma na ndị niile ga-abata na 0.10 nke PUBG Mobile na nke gụnyere ...
HMD Global kpughere ahịa ekwentị Nokia maka afọ abụọ gara aga
Chọpụta karịa ahịa ndị Nokia nwere n'ụwa niile n'ime afọ abụọ gara aga dịka HMD Global kwadoro
Ndi Nokia 3.1 Plus rutere na Spain
Chọpụta ihe gbasara mwepụta nke Nokia 3.1 Plus na Spain, ọnụahịa ọ ga-enwe yana ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ekwentị.
Mediatek's Helio M70 5G ga-amalite mbupu n'afọ ọzọ
Mediatek ekwuputala ma webata Helio M70 na China. Firmlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ dịlarị nakwa na a ga-amalite ikesa ya n'afọ ọzọ.
Xiaomi gosipụtara ahụmịhe ọkpụkpọ vidiyo 5G na ụdị 5G nke Mi MIX 3
Xiaomi gosipụtara 5G ọkpụkpọ ọkpụkpọ vidiyo na Mi MIX 3 5G na ihe omume na China. Anyị na-agbasa nkọwa nke a!
Kwenyesiri ike: OnePlus ga-ebupụta smartphone mbụ 5G na Snapdragon 855 na mbido 2019 na Europe
Dabere na OnePlus, ama ama mbụ na Europe ga-ebupụta otu ụlọ ọrụ ahụ. Ọ ga-abata na Snapdragon 855, aha ọzọ, na mbido 2019.
Samsung Galaxy A50 gafere Geekbench na Exynos 9610
E debanyere Samsung Galaxy A50 na Geekbench nchekwa data yana usoro dị n'etiti Exyos 9610 dị elu.
Sọpụrụ ịmebata ama onyonyo igwefoto na Jenụwarị
Chọpụta ụbọchị a ga-ewepụta ekwentị Honor ọhụụ, nke ga-abata na igwefoto agbakwunyere na ihuenyo ya.
Nke a bụ mgbanwe mgbanwe nke Instagram ga-abịa n'oge na-adịghị anya
Instagram ga - enweta mgbanwe dị ukwuu na ndepụta akụkọ ya na nsụgharị ọhụrụ nke na-abịabeghị gam akporo na iOS.
Nokia 8.1: Ọkara ọkwa ọhụrụ kachasị ọhụrụ dị ugbu a
Chọpụtakwuo ihe banyere Nokia 8.1, Nokia ọhụụ ọhụụ adịgboroja ọhụụ ewepụtara. Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite.
Official: Nubia Z17 ga-enweta gam akporo achịcha n'oge na-adịghị anya
N'ikpeazụ kwadoro: ZTE's Nubia Z17 ga-enweta mmelite na gam akporo 9.0 achịcha n'oge na-adịghị anya, ọ bụ ezie na amaghị ya mgbe ọ bụla.
Meizu C9, nke ejiri akara ngosi 18: 9 mepee nke ọma na njedebe
Meizu C9 bụrịrị gọọmentị. Mara njirimara, njirimara teknụzụ, ọnụahịa na nnweta nke ọhụụ ọhụrụ a.
Meizu M6T, ama ohuru nwere ogo / oke ruru oke
Emebere Meizu M6T na India. Mara njirimara ya, nkọwapụta teknụzụ, ọnụahịa na nnweta ya.
Onye isi oche nke Xiaomi na-egosi mbido ekwentị na igwefoto MPN 48
Xiaomi ga - ebido ekwentị nke nwere igwefoto 48 -pipixel ya na eriri LED abụọ n’azụ, dịka mkparịta ụka onye isi ala gosipụtara.
Ekwentị 10 kachasị ike na November 2018, Dabere na AnTuTu Benchmark
AnTuTu na-ewetara anyị ogo nke smartphones 10 kachasị ike nke ọnwa Nọvemba nke afọ a. Anyị na-egosi gị!
Huawei na-ezube izipu ngwaọrụ 200 nde na ụwa site na afọ na-esote
Huawei na-ezube izipu ihe ngwaọrụ 200 nde wearable n'afọ ọzọ. Xiaomi, n'aka nke ya, na-atụ anya ịbawanye mbupu ya.
Choputa ihe banyere Snapdragon 855, ihe ohuru ohuru maka gam akporo di elu site na Qualcomm nke biara na 5G ma meputa ya na 7 nm.
Google wepu ngwa 2 a ma ama na Cheetah Mobile na Kika Tech
2 ngwa ama ama site na Cheetah Mobile na Kika Techa adịghịzi na Playlọ Ahịa Google. Google wepụrụ ha.
Egwuregwu Epic na-ebupụta ụlọ ahịa egwuregwu gam akporo ya
Chọpụta ihe banyere Epic Games Store, ụlọ ahịa egwuregwu sitere n'aka ndị okike nke Fortnite na-abịa gam akporo na mbido afọ ọzọ.
Honor Magic 2 na-enweta mmelite ọhụrụ nke na-enye gị ohere ịmata calorie na nri gị
The Honor Magic 2 na-anata ọtụtụ mmelite kemgbe mmalite ya, nke ọ bụla dị mma karịa nke ọzọ yana ...
Achịcha igwe na-egbu oge maka Nokia 8, mana ọbịbịa ya dị nso
Ngwaọrụ gam akporo Pie maka Nokia 8 egbu oge, mana Juho Sarvikas, onye isi Nokia ekwuola na ọ ga-abata, dịka atụrụ anya.
Vingrup, otu kachasị na teknụzụ na Vietnam, na-eweghara ọtụtụ BQ
Chọpụta ihe banyere ọrụ ahụ nke pụtara na 51% nke BQ gafere n'aka Vingrup, otu teknụzụ kachasị ukwuu na Vietnam.
South Korea ga-ewepụta netwọkụ 5G na Satọde: ọ ga-abụ mba izizi n'ụwa iji zụọ ahịa ya
South Korea dị njikere iti United States of America na China ịpụta dị ka obodo mbụ iji mejuputa teknụzụ 5G.
Samsung Galaxy A8s nwere ụbọchị ngosi
Samsung ga-ekpughere Galaxy A8s ekwentị igwefoto ya na Disemba 10 n'ihu Huawei.
Nkọwapụta na onyonyo nke Huawei Enwe 9 na-apụ apụ tupu ya amalite
The Huawei Enwe 9 na-abanye n'ime ihe oyiyi na nkọwapụta teknụzụ ya. Ọ ga-abụ ụdị dị iche iche nke ụtọ 9 Plus.
Nke a bụ Samsung Galaxy S10 Plus: ihe ntụgharị ọhụrụ na-ewepụta nhazi ya na ese foto 5
Ndị a sụgharịrị na-egosi Samsung Galaxy S10 Plus dị ka ọ ga-akụ n'ahịa. 5 ese foto, Infinity-O ụdị ngosi na ndị ọzọ.
Ndị ọrụ Google Hangouts ga-agbanwe gaa na Hangouts Chat na Meet
Chọpụta nke ngwa ga-eji dochie Google Hangouts mgbe ngwa ahụ akwadoghịzi.
Helio P90 sitere na MediaTek enweela ụbọchị ngosi
Chọpụta karịa maka ụbọchị ngosi ngosi nke Helio P90, ihe ọhụrụ MediaTek processor, na Disemba 13.
Google Hangouts nwere ike ịnwe ụbọchị ezumike
Chọpụta ihe banyere njedebe nke ngwa izipu ozi Google Hangouts nke enwere ike ịchụpụ n'ụlọ ọrụ na 2020.
France na - achoputa ekwentị 8 nke na - ebute oke radieshon
Chọpụta ihe banyere ọnụ ọgụgụ ekwentị ndị achọpụtara na France maka ịpụ ọkwa larịị dị elu karịa ka ekwere.
Nkọwa ndị ọzọ na-apụta na Asus ZenFone Max Pro M2 na ZenFone Max M2
Fewbọchị ole na ole gara aga, ozi dị mkpa banyere ekwentị Asus na-abịanụ abanyela. Kemgbe ahụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ...
Enweela ekwentị Vivo ọzọ na onyonyo kpamkpam: ntinye ntinye ọhụrụ na-abịa
Ihe omimi Vivo ohuru anarala asambodo nke NCC na Taiwan - ohuru ohuru na-abia.
Ọnọdụ pụrụ iche nwere ese foto 5 nke Google mepụtara iji bulie Ọnọdụ Eserese nke Pixels
Ikpe ahụ nwere kamera 5 enwewo ike ịnye ozi dị mkpa nke mere na Ọnọdụ Eserese nke Pixel 3 ka mma.
Mmegharịrị maka ịgagharị na azụ na-abịa Chrome maka gam akporo n'oge na-adịghị anya
Mmegharị mmegharị ụzọ abụọ ga-adị na Chrome: ihu na azụ. N'ụzọ dị otú a, ahụmịhe onye ọrụ kachasị.
Pokémon GO, nke a bụ otu ụbọchị Community Community si arụ ọrụ
A na-emelite Pokémon GO maka Community Day, na-enye anyị ohere ịchụ nta ọnụ ọgụgụ Pokémon ọhụrụ ka ị gbakwunye na Pokédex anyị.
Kwadoro: Huawei na-arụ ọrụ na ihe ọzọ na gam akporo
Ọ bụ gọọmentị: Huawei kwadoro na ha na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ nke ha, ihe ọzọ na gam akporo. Chọpụta ihe kpatara ya.
Etu ị ga-esi tụọ oge ị nọrọ na Facebook
Chọpụta ọrụ ọhụụ nke iji atụ ọrụ na Facebook iji nwee ike ịlele oge ị na-etinye kwa ụbọchị na ngwa ahụ.
The addictionụ ọgwụ ọjọọ ahụ nke Fortnite na-emepụta bụ "dị ike dị ka ọgwụ ọjọọ"
Ihe riri ahụ nke egwuregwu Epic Games, Fortnite, dị oke egwu nke na ọtụtụ na-ekwu na ọ dị ka nke ọgwụ na-akpata.
OnePlus 3 na 3T Nweta Mmelite Ọhụrụ Na-eweta Ndakọrịta na Bullets Type-C ekweisi na ndị ọzọ
Nkesa mmelite ọhụrụ maka OnePlus 3 na OnePlus 3T amalitela. Mmelite ahụ na-abịa dị ka OxygenOS 5.0.7.
Kwadoro: Oppo iji kpughee Smartphone foldable na MWC19
Onye ọrụ gọọmentị: Dabere na onye isi oche nke Oppo, ụlọ ọrụ ahụ ga-eweta mpempe akwụkwọ mpịachi na 2019 Mobile World Congress.
The OnePlus 6T McLaren Edition ga-abịa na 10 GB nke Ram na 256 GB nke ebe nchekwa dị n'ime
Akụkọ ọhụrụ na-egosi na ama ama OnePlus na-esote, OnePlus 6t McLaren Ediion, ga-eji 10GB RAM na 256GB nke ROM kụọ ahịa ahụ.
N'ikpeazụ Google Maps na-emelite menu igodo ụzọ
Nchịkọta nhọrọ igodo bụ ihe kachasị ọhụrụ na mmelite Google Maps. Oge a ka emechara ya ihe niile.
A gam akporo 9.0 achịcha na-abịaru nso na Nokia 8: ọbịbịa ya dị nso
Nokia 8 abanyela na Geekbench, jiri gam akporo 9 Pie dị ka sistemụ arụmọrụ ya: nnabata ya dị nso. Anyị na-agbasawanye gị!
Moto X4 malitere imelite na gam akporo 9 achịcha
Moto X4 amalitela imelite na Android 9 Pie na Brazil, yabụ anyị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-eru ngwaọrụ niile na izu ndị na-abịanụ.
Realme U1, ekwentị izizi nwere Helio P70 processor si Mediatek, bụ ọkwa ugbu a
Realme U1 bụzi onye gọọmentị. Mara atụmatụ, nkọwa, ọnụahịa na nnweta nke ekwentị Helio P70 mbụ nke ụwa!
Huawei Nova 4 na-akwado imepụta ya na ezigbo onyonyo ọhụụ
A usoro nke ezigbo onyonyo nke Huawei Nova 4 abanyela ebe anyị nwere ike ikwenye atụmatụ ya nke pụtara maka igwefoto agbakwunyere n'ihu.
UMIDIGI Otu Max, ama ọhụụ nke ụlọ ọrụ na Helio P23
UMIDIGI Otu Max bụ onye ọrụ gọọmentị: mara njirimara niile, nkọwapụta teknụzụ, ọnụ ahịa yana nnweta ngwaọrụ ọhụrụ a.
Egwuregwu Nubia Red Magic Mars na-aghọ nke 10 GB nke RAM na ndị ọzọ
Nubia Red Magic Mars bụrịrị gọọmentị: mara njirimara niile, nkọwapụta teknụzụ, ọnụahịa na nnweta igwe egwuregwu ọhụụ a.
Nwere ike ịwụnye beta 9 achịcha beta na Samsung Galaxy S9 gị na Spain
Ndị gị nwere Samsung Galaxy S9 nwere ike ịnụ ụtọ ugbu a gam akporo 9 achịcha dị ka beta dị site taa.
Ndị ọrụ Huawei nwere ego karịa ndị ọrụ Apple, nchọpụta ọhụrụ na-achọpụta
Nnyocha ọhụrụ ewepụtara na-ekpughe na ndị ọrụ nke Huawei ma ọ bụ ụdị ndị China ndị ọzọ nwere ego dị elu kwa ọnwa karịa nke ndị iPhones.
Gbanwee onwe gi n’ime agwa 3D n’ime ZEPETO: ikori, zuko ma soro ndi enyi gi sere foto
Ngwa gepeto, ma ọ bụ nke akpọrọ Zepeto, na-enye anyị ohere ịghọ agwa 3D iji sonye na ...
Samsung Galaxy S10 Plus gafere AnTuTu na Exynos 9820
Samsung Galaxy S10 Plus gafere AnTuTu na Exynos 9820 na nkọwa ndị ọzọ. Ọ ga-abụ otu n'ime ekwentị kachasị ike nke 2019.
Oge ịgba egwu nke ndị ntorobịa China abụrụla ọkara na Sọpụrụ Ndị Eze, ka Tencent na-ekwu
Egwuregwu Tencent gwụchara mmalite nke nnabata nke China maka otu egwuregwu kachasị ewu ewu, sọpụrụ ndị eze, na Nọvemba 19.
MediaTek na-edeba ọghọm mgbe mbelata nke mbupu nke ndị nhazi ya
MediaTek registers mbelata ke Mbupu nke ya processors: Qualcomm ewe ala ma na-positioned dị ka ika mmasị.
Xiaomi Mi 8 SE pụtara na gam akporo Q na Geekbench: ọ ga-enweta mmelite ahụ mgbe ahapụpụtara OS
Xiaomi Mi 8 SE pụtara na Geekbench yana sistemụ arụmọrụ gam akporo Q. Ozugbo a tọhapụrụ ụdị gam akporo a, ị ga-enweta ya.
Huawei malite ekwentị mbụ nwere oghere na ihuenyo ahụ: Samsung ga-atụfu agbụrụ ahụ
Huawei na-akwadebe smartphone mbụ nwere oghere na ihuenyo ahụ: ọ ga-eti Samsung, ụlọ ọrụ ọzọ na-agbakwa ọsọ.
Gbanwee gam akporo gị maka ekeresimesi: otu esi ebudata ụdaolu Krismas n'efu
Huawei na-eru Samsung nso n’ahịa ụwa
Chọpụta karịa gbasara mmụba nke ahịa nke Huawei, nke na-adịwanye nso na Samsung na ngalaba ahịa a.
Pixel 3 Lite na-etinye na foto na-esote Pixel 3: mbata ya ga-adị nso
Oge izizi anyị nụrụ banyere ekwentị ahụ, ọ nwere aha akara 'Sargo', ọ dịkwa na mbido ...
Realme U1 Specs Leaked: Ga-eji MediaTek nke ọhụrụ Helio P70 na ndị ọzọ
Realme U1 agbapụwo na net ya na nkọwapụta teknụzụ ya na atụmatụ ya dị mkpa - ọ ga-eji Mediatek Helio P70 na ndị ọzọ.
Ihe ọhụụ na-agbasa n'etiti ndị na-emepụta ihe: ugbu a, Lenovo na-edekọ ekwentị na igwefoto azụ atọ
Ọzọ smartphone emeputa ga-esonye ugbu a na-emekarị, nke bụ na-ewetara a ọhụrụ elu-ọgwụgwụ na Mmaji Atọ n'azụ igwefoto, na ọ bụ Lenovo.
The Huawei P Smart 2019 leaks ọzọ, oge a, na Kirin 710
The Huawei p Smart 2019 agbabawo na netwọkụ nwere isi asatọ Kirin 710 n'okpuru mkpuchi. Mara nkọwa niile!
SK Hynix na-ewebata usoro DDR5 DRAM mbụ nke ụwa - nrụpụta iji bido na 2020
Ọgbọ nke ugbu a nke DRAM, DDR4, nke a makwaara dị ka "ọnụọgụ data nke abụọ n'ọgbọ nke anọ", enweelarị onye nọchiri ya, ọ bụkwa DDR5 DRAM modul.
Xlọ ụlọ ahịa Xiaomi mbụ na Mexico nwere ụbọchị mmeghe
Chọpụta ihe banyere oghere nke ụlọ ahịa Xiaomi mbụ na Mexico nke ga-eme na Disemba, nke ụlọ ọrụ ahụ kwadoro.
ColorOS 6.0 bụ nke gọọmentị ugbu a: na-enwu gbaa, na-enwu gbaa, yana nweezigharị ọrụ onye ọrụ maka obere ekwentị
Oppo esitela na eze gosipụta usoro nhazi ọgbara ọhụrụ ya, ọ bụ ColorOS 6.0. Mara ihe omuma na njirimara nile.
Bọọlụ Bọọlụ bụ egwuregwu ọzọ site na Egwuregwu Ketchapp iji jide gị na egwuregwu ya
Bọọlụ Bọọlụ bụ egwuregwu ọhụrụ emere site na Egwuregwu Ketchapp, ihe nkiri vidio ahụ nke kacha mma maka egwuregwu nkịtị na ...
Samsung Galaxy A9 dị na Spain ugbu a
Samsung ka kwupụtara ọkwa dị na Galaxy A9 na Spain. Mara nkọwa nke ọnụahịa ya na ebe ị nwere ike ịzụta ya!
Ihe kacha mma Black Friday na-emekọ na Movilshacks
Chọpụta Black Friday na-enye anyị na Movilshacks nwere 70% ego na ekwentị yana ngwa.
Huawei Register Multiple Model Aha maka Future Honor ekwentị mkpanaaka na
Huawei na-edeba aha ọtụtụ aha nke ọdịnihu ama ama ama. Mara ihe niile banyere ozi ọma a.
Usoro 'Galaxy M' nke Samsung malitere igosi ihe ịrịba ama nke ndụ: Galaxy M2 pụtara na Geekbench
Ekwuru na Samsung Galaxy M2 ka abanyela na Geekbench n'akụkụ quad-isi Exynos 7885. Mara nkọwa.
A ga-ahapụ Meizu 16S yana ihe nkwụnye ọkụ yana mgbawa egwu dị iche iche n'ime
Meizu CEO Jack Wong ekwuputala na a ga-ahapụ Meizu 16S na nkwụnye mgbawa egwu dị iche. Chọpụta!
Ihe ncheta Ndagwurugwu 2 na Motosport Manager 3 na € 0,90 na ere
Maka ụbọchị 7, a pụrụ ịzụta Ncheta Ndagwurugwu 2 na Motosport Manager 3 na purchasedlọ Ahịa Google. Egwuregwu 2 magburu onwe ya.
A ga-ewepụta Qualcomm's Snapdragon 4 na Disemba 8150
December 4 a, Qualcomm ga-eweputa ihe nhazi ya ọzọ, Snapdragon 8150. Mụtakwuo maka nke a.
Etu ị ga-esi soro enyi gị kerịta ihuenyo egwuregwu gị na PlayJ, ngwa Sony ọhụrụ
Sony amalitela PlayJ, ihe ikpo okwu ohuru iji kesaa egwuregwu gi na otu enyi gi nwere ike ile ha anya maka ochi na ese foto.
Ngwa na egwuregwu kachasị mma na Spain na TheAwards
Chọpụta ndị mmeri nke ngwa na egwuregwu kachasị mma na Spain na mbipụta mbụ nke TheAwards 2018 emere na November 15.
Music Amazon Unlimited: Nweta egwu ọnwa atọ naanị euro 0,99
Chọpụta ihe banyere nke a Amazon Music Unlimited nkwalite ma chọpụta ọrụ ndị ọzọ dị ka Prime Video na Kindle Unlimited na weebụ.
Ekwentị 512GB Asus ROG dị ugbu a maka ire ere na US
Ejiri Asus ROG ekwentị nwere 512GB nke ebe nchekwa dị n'ime United States. Mara ahịa na nkọwa!
Fortnite debuts ma etu ọnụ na egwuregwu ọhụụ, ọ bụkwa 'Wild West'
Fortnite weputara onodu egwuregwu ohuru 'Wild West', nke biara na otutu ihe ohuru, ngwa agha na obtehos iji. Anyị na-agwa gị nkọwa!
Meizu 16 nwere onye nọchiri ya: ntụgharị nke meizu 16S ka na-agbapụta na ntanetị ma gosipụta ụfọdụ atụmatụ imepụta mara mma.
Cannwere ike ịzọpụta onwe gị site na ịmara ọdịnaya nke oku ahụ na transcripts echekwara na Google Pixels.
Nsogbu ndị ahụ na-aga n'ihu na Pixel 3 nke Google: ugbu a, ahụhụ na-ewepu igwefoto
Otu ahụhụ na Pixel 3 na-eme ka igwefoto kwụsị ọrụ na ekwentị ga-amalitegharị. Mara ihe niile banyere mkpebi ọhụrụ a.
PUBG Mobile emelitere na 0.9.5 site na iji 100-player hardcore mode na ndị ọzọ
Oge PUBG Mobile 4 na-abịa echi, mana ị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị ike siri ike nke mmelite PUBG Mobile.
OxygenOS Open Beta 7 rutere na OnePlus 6 nwere ọrụ ọhụụ na nke na-atọ ụtọ
Ozi ọma maka ndị ọrụ OnePlus 6: OxygenOS Open Beta 7 dị maka ngwaọrụ ndị a. Mara ozi ọma ọ na-eweta!
Meitu na-aga ịmalite igwe nwere kamera ihu atọ
Meitu na-akwadebe ihe omuma ohuru; otu nke ga-abata na ese foto atọ n'ihu. Anyị na-agbasa nkọwa.
Oppo 'Hyper Boost' osooso tech na-abịa na ala-ọgwụgwụ phones n'oge na-adịghị
Oppo ga - ebido osiso osiso 'Hyper Boost' na onodu di iche-iche di ala. Mara nkọwa.
Anọpụrụ Anwansi 2 na-achịkwa ụgbọ ala na-adịghị akwọ ụgbọala ekele maka ikike YOYO
Honor Magic 2 na-eji ụgbọ ala na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala n'ihi ike nke onye inyeaka ya 'YOYO'. Mara nkọwa.
Onu ogugu ohuru nke eji eme oku na akparaghị ókè na SMS na 3GB nke data maka € 14,95 / ọnwa
Chọpụta karịa gbasara ọnụego ọhụrụ Amena weputara taa, abalị iri na itolu nke ọnwa Nọvemba, na mgbakwunye na nkwalite nkwado ekeresimesi ọ na-emebu maka ndị ahịa.
Xiaomi na-aza nsogbu nchapu ihuenyo nke Mi Mix 2S ma kọwaa ihe kpatara ya
Xiaomi Mi Mix 2S nwere nsogbu ihuenyo mgbe ị na-ese foto na vidiyo site na ngwa igwefoto. Xiaomi azaghachila nke a.
PUBG Mobile meriri Golden Joystick 2018 dị ka Egwuregwu Egwuregwu Kachasị Mma nke Afọ
PUBG Mobile meriri Golden JoyStick maka Best Mobile Game nke 2018 megide nnukwu onye asọmpi ya, Fortnite. Obere ihe nrite maka nnukwu egwuregwu.
Nubia weputara ekwenti ohuru na November 28, ya bu Red Magic Mars
Nubia ekwenyela mwepu nke Red Magic Mars maka November 28 ọzọ na ihe omume. Mara ihe omuma banyere akuko a.
Ndị a bụ mbelata na ọnụọgụ oroma maka Black Friday
N’okpuru, anyị na-egosi gị ihe niile enyere gị na onye ọrụ mmanụ oroma nyere anyị ka anyị mee emume Black Friday
Mark Zuckerberg gbara ndị isi ya ume ka ha gbanwee gam akporo mgbe ha kwusịrị site na Tim Cook
Nsogbu ndị dị na njikwa nke data Facebook anyị, emeela ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ukwu, nke na-enwe mgbe ụfọdụ nsonaazụ ha.
Asus Zenfone Max Pro M2 ga-abụ ekwentị egwuregwu ma ga-abata na December 11
Kwadoro: Asus ZenFone Max Pro M2 ga - abanye n'ahịa ahụ na Disemba 12 dị ka ama maka ndị na - egwu egwuregwu.
Achịcha gam akporo na-aga n'ihu ịgbasa: ugbu a maka Xiaomi Mi A2 na Motorola Moto One Power
Achịcha gam akporo dị maka nrụnye na Xiaomi Mi A2 na Motorola One Power na India. Anyị na-enye gị nkọwa.
Samsung Galaxy S9 na S9 + na-enweta beta nke One UI dabere na gam akporo achịcha: otu esi etinye ya
Betadị beta nke usoro nhazi nke Samsung ọhụrụ, Otu UI, dị ugbu a maka Galaxy S9 na S9 + ma dabere na Android Pie.
Huawei dị nnọọ mara ọkwa na ọ ga-ewebata ekwentị 5G mbụ ya na Mobile World Congress na 2019. Lee nkọwa ndị a.
UMIDIGI ga-aba na ahia Latin America n’abalị Fraide ọzọ
Ozi ọma maka Latin America: UMIDIGI ga-erute ahịa a Black Friday na-esote yana onyinye na igwegharị ya maka ọtụtụ mba.
Qualcomm si Snapdragon 8150 karịrị akara 360K na AnTuTu
Qualcomm si Snapdragon 8150 karịrị akara ngosi 360 puku na AnTuTu, otu n'ime akara ngosi kachasị ewu ewu.
Honor bụ China kacha ere Singles Day ama ama
Honor, sub-brand nke Huawei, kwuputara na ọ bụ onye na-eme ihe nkiri na ụbọchị Singles n'usoro ire ahịa na nnata ego.
Huawei akwadebe onye nwere ọgụgụ isi olu olu ya
Huawei na-arụ ọrụ ehihie na abalị iji weta onye enyemaka olu ọhụrụ n'ahịa. Anyị na-agbasa nkọwa nke a.
Gkpụrụ 5G maka ụgbọ ala mara mma na ụlọ ọrụ amamịghe na-abata na njedebe nke 2019
A ga-edozi ụkpụrụ 5G na Disemba afọ na-esote ma mepee ụzọ maka ụgbọ ala ejikọtara na ụlọ ọrụ maara ihe, dị ka Samsung si kwuo.
Ozi ọma: na OnePlus 5 na 5T ga-enweta gam akporo achịcha n'oge na-adịghị anya
Y’oburu na ibu onye nwe OnePlus 5 ma obu 5T. N'oge na-adịghị anya, ị ga-enweta mmelite na gam akporo achịcha na ngwaọrụ gị.
Meizu na-achọ ịbụ ụlọ ọrụ izizi iji wepụta ekwentị na Snapdragon 8150
Rumorsfọdụ asịrị na-egosi na Meizu ga-abụ akara izizi iji bido ọnụ ọnụ ya na Snapdragon 8150, ọ ga-abụ n’ọnwa Disemba nke afọ a.
Honor Magic 2 emelitere ma dochie EMUI 9.0 site na Ime Anwansi UI 2.0 na gam akporo achịcha
Na-asọpụrụ Ime Anwansi 2 na-anata mmelite ahụ na A gam akporo n'okpuru Magic UI 2.0, ụdị kachasị ọhụrụ nke mbinye aka mbinye.
Key nkọwa leaked banyere Asus Zenfone Max Pro (M2) na Zenfone Max M2
Ihe omuma ohuru na abia nke oma banyere igwe Asus na abia. Anyị na-ekwu maka Zenfone Max Pro (M2) na Asus Zenfone Max M2.
Huawei nzọ na mmegharị
Huawei na-aga n'ihu na-emewanye EMUI ma gbakwunye mmelite kachasị maka njikwa akara maka imirikiti ngwaọrụ ya
Netflix bombshell: ule na ọnụ ala dị ọnụ ala naanị maka ekwentị
Enwere ike iji ọnụego Netflix ọhụrụ mee ihe site na smartphone na ihe karịrị ọnụ ala belata: ọkara ọkara ọnụ ala dị ugbu a.
Leaks na-egosi na Asus kwadebere Zenfone na igwefoto atọ na mbadamba 10 ″ Chrome OS
Dabere na nkọwa dị iche iche, ụlọ ọrụ China, Asus, na-arụsi ọrụ ike itinye na katalọgụ ekwentị ya na ...
A ga-enwe Samsung Galaxy S10 Lite, ndị a bụ atụmatụ ya
Samsung na-arụ ọrụ na Samsung Galaxy S10 Lite, ụdị decaf nke ọkọlọtọ ya na-esote nke ga-egosipụta ụfọdụ ngwaike dị ike.
Alibaba weputara $ 10 ijeri na uru naanị otu elekere na ụbọchị Singles
Alibaba welitere ihe ruru $ 10.000 ijeri na elekere mbụ nke ire ere Singles Day, nke malitere na Sọnde.
Ndabere nke Xiaomi Mi 9 na-apụta yana nkọwapụta ọrụ ya nwere ike
Ihe ngosi nke Xiaomi Mi 9 apụtawo na ntanetị yana nkọwapụta ọrụ ya na njirimara ya. Mara ha niile!
Nkọwa mbu ka ị buru n'uche banyere Samsung Galaxy S10
Samsung nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Galaxy S10 ga-abata na usoro nke teknụzụ ọhụrụ nke ga-etinye ya na ohere.
Oukitel U23 Nkọwapụta
Ọzọ anyị ga-egosi gị nkọwa niile nke njedebe ọzọ site na ụlọ ọrụ Oukitel, U23.
OnePlus weputara 5G ekwentị na 2019 n’aha ohuru
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ekwentị 5G 2019G ọhụrụ a site na OnePlus nwere aha ọhụrụ a ga-eweta na XNUMX,.
Samsung ịmalite Galaxy M nso nke ekwentị n'oge na-adịghị anya
Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụụ nke Galaxy M nke Samsung ga-ebupụta n'ahịa na-esote afọ, iji megharịa etiti ya.
N’oge na-adịghị anya, ị ga-ehichapụ ozi ezigara na Facebook n’ime nkeji iri
N’oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ihichapụ ozi ị zipụrụ site na Facebook n’ime oge kachasị karịa nkeji 10. Anyị na-enye gị nkọwa.
Huawei ga-amalite igwe nwere igwefoto n'ihu n'okpuru ihuenyo
Huawe na-arụ ọrụ na ijikọ igwefoto n'ihu ihuenyo, dị ka ọhụụ ọhụrụ si apụta. Anyị na-enye gị nkọwa.
Google na-aru oru na menu nke ndi Android iji mee ya ngwa ngwa ma di nma
Nchịkọta nhọrọ nke gam akporo ga-agbanwe n'oge na-adịghị anya. Google na aru oru ime ka ebe nke a diri ndi oru.
Google Pixel 3 na-aga n'ihu na-enwe nsogbu: ugbu a ọ na-ekpo oke ọkụ ma mechie mgbe ị na-akwụ ụgwọ
Pixel 3 nke Google nwere nsogbu ichaji. Dịka ihe ndị ọrụ dị iche iche si kwuo, ọ na-akwụsị mgbe ọ gabigara ókè. Anyị na-agbasawanye gị!
Ee, n'ikpeazụ, Galaxy S8 na Galaxy Note 8 ga-enweta One UI
Samsung ọhụrụ One UI interface ga-emesị abata na Galaxy S8 na Rịba ama 9. Otu interface na nzọ na ọchịchịrị isiokwu.
Samsung ga-akụ nzọ na mkpisiaka ihe mmetụta na ihuenyo ahụ
Chọpụta ihe banyere ụdị mkpisiaka ihe mmetụta na Samsung na-aga iji na ya n'etiti nso na-esote afọ eze.
Xiaomi ga - amalite na UK na Mi 8 Pro na ngwaọrụ ndị ọzọ na November 9
Xiaomi Mi 8 Pro ga - amalite na November 9 na UK tinyere ngwaọrụ ndị ọzọ. Anyị na-enye gị nkọwa nke mmalite a.
Ọ bụrụ na ị nwere Galaxy S8 ma ọ bụ Nkọwa 8, ị ga-agbapụ na One UI, interface ọhụrụ Samsung
UI Otu bụ interface ọhụrụ nke na-abịa na Android achịcha na Galaxy S9, Rịba ama 9 na Galaxy S10 na-esote. A na-ahapụ Galaxy S8 na-enweghị ya.
Samsung na-eme nzuzu nke asọmpi niile ya na "notch"
Infinity screen na folda mpịachi na-eme nzuzu nke asọmpi Samsung niile jiri akara ọhụụ gbalịa ịme ihe.
Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer na Mi MIX 2S na-enweta ọrụ igwefoto 'Ọnọdụ abalị' na beta emechiri emechi
Ọnọdụ abalị ma ọ bụ Ọnọdụ abalị nke Xiaomi Mi Mix 3 ga-adị, n'oge na-adịghị anya, na Mi 8, Mi 8 Explorer na Mi Mix 2S.
Nweta BQ maka naanị 1 euro ekele Black Friday
Black Friday a ị nwere ike nweta ngwaọrụ BQ maka 1 euro, naanị ị ga-edebanye aha na Black List ma bụrụ onye kachasị ọsọ kwa ụbọchị.
Google anwalelarị ikpesa ihe mberede na rada na Google Maps
Fọdụ ndị ọrụ achọtala nhọrọ nke inwe ike ịkọ akụkọ ihe mberede na rada na Google Maps: atụmatụ ọhụrụ nke nnukwu G.
Jiri uru 11.11 dị na ekwentị OUKITEL
Choputa ihe ndi ozo n’inweta ego di na igwe OUKITEL n’oge 11.11. Ego ruru 50% na nso ya nke smartphones.
Xiaomi dị na ahịa 82 si mba ọzọ
Xiaomi na-eto eto. Companylọ ọrụ China na-eweta ihe ịga nke ọma ọ na - enwe ma gosipụta ọnụnọ ya na ahịa 82 si mba ọzọ.
Nokia 8.1 a tụrụ anya ya ga-abụ nsụgharị mba nke Nokia X7 amalitelarị
N’ọnwa gara aga, Nokia webatara ekwentị Nokia X7 na China. Ugbu a, ụlọ ọrụ Finnish nwere ike na-arụ ọrụ na ...
Xiaomi AirDots Ntorobịa, ihe ọzọ na AirPods maka ihe na-erughị euro 30
Ntorobịa Xiaomi AirDots bụ ekweisi ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Eshia nwere oke yiri nke AirPods mana na ọnụ ahịa dị egwu: euro 25.
Ihe ngosi vidiyo na ihe onyonyo ọhụụ bịara na Nokia 9, ekwentị nwere ese foto azụ ise
Nkọwa ndị ọzọ na-apụta na flagship na-abịanụ HMD Global, Nokia 9. Ugbu a, ihe ngosi vidiyo ọhụrụ na onyonyo dị ebe a.
Google ga-emelite Pixel 3 iji dozie nsogbu nchekwa
A ga-edozi nsogbu ncheta nke Pixel 3 na mmelite nke ga-enye ohere ịnweta ọtụtụ ngwa mepere emepe ọzọ.
Jiri uru kachasị mma na ekwentị gam akporo na 11.11/XNUMX na eBay na-enweghị echere ụbọchị a na ụlọ ahịa a ma ama.
You nwere Homelọ Gugul n'ụlọ? Chọpụta ọnụọgụ kachasị mma iji nweta ọtụtụ ihe enyemaka enyemaka Google.
Leaked isi atụmatụ na ụdịdị nke Sọpụrụ V20, ika ọzọ flagship
Wepu ihe njirimara na nkọwapụta nke Honor V20 ga-abịa, ngwaọrụ arụmọrụ ọzọ na-esote site na ụlọ ọrụ ahụ.
A ga-ekwuputa ekwentị ihuenyo ekwentị Samsung na November 7
Samsung ga-ewebata ekwentị ya na ihuenyo mpịachi na San Francisco ụbọchị abụọ. Ngwaọrụ nke ghọrọ mbadamba ma ọ bụ mkpanaka.
Nkọwa ekpuchitere banyere Qualcomm si SM7150 na SM6150, ndị na-esote ya ga-amalite
Qualcomm nwere ihe nhazi ọhụrụ abụọ dị njikere maka anyị: SM7150 na SM6150. Lelee leaked nkọwa na a ọzọ ụzọ ẹkedori.
Onye OnePlus 6T ga-abata n'oge na-adịghị anya na agba ọhụrụ
Chọpụta ihe banyere agba ọhụụ nke a ga-ebupụta OnePlus 6T na ahịa mgbe ị gachara izu ụka a na weebụsaịtị ya.
Uche nke Samsung Galaxy S10 agwụla nke ọma
Otu asịrị ọhụrụ na-egosi na nhazi nke Samsung Galaxy S10 dịla njikere. Anyị na-agwa gị nkọwa nke nkwupụta a na nso nso a.
Onye enyemaka Google agagh abata na Sonos okwu rue 2019
Njikọ nke Sonos na Google Assistant maka ugbu a ga-echere ruo mbido afọ ọzọ, dịka ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara.
Edechara ọnụahịa nke Xiaomi Mi 8 Lite na Europe
Chọpụta karịa ọnụahịa nke Xiaomi Mi 8 Lite ga-enwe na mbido ya na Europe na ụdị ya abụọ dị iche iche.
Huawei na-akwado dị ka nke abụọ kachasị mma
Huawei abụrụla onye okpueze dị ka akara ekwentị kacha mma n'ụwa. Chọpụta ego ole ha rere na nkeji nke atọ.
Ọzọ kwadoro: enwere obere oge maka WhatsApp iji gosipụta mgbasa ozi
Ọzọ ọ na-egosi na WhatsApp ga-egosi mgbasa ozi. Chọpụta nkọwa niile na ihe Chris Daniels kwuru banyere akụkọ ọjọọ a maka ọtụtụ.
Ekwentị 10 kachasị ike nke October 2018, Dabere na AnTuTu Benchmark
AnTuTu na-ewetara anyị ọkwa nke 10 smartphones kachasị ike nke ọnwa Ọktọba afọ a, nke Xiaomi Black Shark na ndị ọzọ nọ.
Kedu ihe ị kwesịrị ịlele ma ọ bụrụ na ekwentị gam akporo gị agaghị agbanye?
Chọpụta akụkụ ndị anyị ga-elele mgbe ekwentị gam akporo anyị anaghị agbanye ma si otú a mee ka ọ rụọ ọrụ ọzọ.
Xiaomi Black Shark Helo abụghị nke asọmpi: Nubia Red Devils eSport ga-abata na Nọvemba 6
Kwadoro: nke a na November 6, Nubia ga-ebupụta Nubia Red Devils eSport dị ka ama egwuregwu. Ọ ga-enwe 10 GB nke Ram!
Samsung Galaxy A7 (2018) mbụ ngosi na unboxing
Anyị chọrọ ịkọrọ gị mmetụta mbụ anyị banyere Samsung Galaxy A7 (2018), ọnụ ya na igwefoto atọ ahụ dị n'etiti.
Ihe mbu 5G nke MediaTek nwere ubochi weputara
Ihe mbu nke MediaTek nke gha aru oru nke 5G ka eweputara ya na ahia na njedebe nke 2019 dika ulo oru ahu n'onwe ya kwadoro.
Ekwentị 'clamshell' Samsung W2019 nwere ụbọchị mmalite, ọ bụkwa na Nọvemba 9 na-esote
Kwenyesiri ike: November 9 na-esote, Samsung ga-eme ihe omume na China ebe ọ ga-ebupụta Samsung W2019, ekwentị klọọkụ.
Ekwentị Xiaomi na-abịa Yoigo
Chọpụta ihe gbasara nkwekọrịta dị n'etiti Xiaomi na Yoigo ebe ekwentị nke akara ndị China malitere ịdị na onye ọrụ ya.
Na-asọpụrụ Waterplay 8, mmiri na-eguzogide ọgwụ na ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri
Honor ka webatara Honor Waterplay 8, mbadamba mgbochi mmiri nwere igwefoto abụọ nke na-akụ ahịa ahụ na ọnụahịa jọgburu onwe ya.
Achịcha achịcha wepụtara maka Nokia 6.1 Plus; Nokia 3, 5 na 6 kwadoro ịnata ma emechaa
Ozi ọma! Nokia 6.1 Plus na-anatalarịrịrị ịnata gam akporo 9.0 achịcha. Ngwaọrụ ndị ọzọ ga-enweta ya.
RTS Command & Conquer: Rivals Legend na-abịa na Disemba 4
Nye iwu ma merie: Ndị mgba ga-abata na Disemba 4 na ụdị freemium nke a na-atụ anya na Electronic Arts ga-arụ nke ọma.
Sony naanị jisiri ire 1.6 nde na nkeji nke atọ nke afọ a
Sony na-aga n'ihu itinye nnukwu ọghọm na mpaghara ama. Oge a, ụlọ ọrụ ahụ ejiri naanị ụgbọ mmiri 1.6 nde ọdụ na Q3.
Nokia 7.1 dịrịrị na mpaghara North America na nzuzo. Mara nkọwa na ọnụahịa nke ọnụ ahịa a na mba ahụ.
Nokia 6.1 amalitelarị ịnweta ụdị nkwụsi ike nke gam akporo 9.1 achịcha. Mara ihe niile banyere ozi ọma a.
Y’oburu n’acho Twitter “masi”, chee echiche banyere ikela ha
Anyị enweghị ụbọchị a kapịrị ọnụ, mana e nweelarị usoro magmanistic site na echekwa elu nke Twitter iji kpochapụ "dị ka".
Xiaomi na-aga n'ihu egwuregwu ahụ: Pocophone F1 ga-enweta gam akporo Q mgbe ọ malitere
Pocophone F1 ga-emelite ya na gam akporo Q ozugbo emere ya, dika nkwenye nke onye isi ulo oru nyere.
Igwefoto Samsung Galaxy S10 na-akwadebe nnukwu ihe ịtụnanya
Samsung ka webatara ọhụụ ọhụụ nke ihe mmetụta ISOCELL nwere ike ịrịgo igwefoto Samsung Galaxy S10 ma weta ihe ịtụnanya dị egwu.
Xiaomi Mi 8 Lite malitere njem ya zuru ụwa ọnụ: nke dị ugbu a na France na Ukraine
Xiaomi Mi 8 Lite dị na France na Ukraine. Mụta nkọwapụta nke ihe onye ọnụ na-ekwuchitere ụlọ ọrụ ahụ wepụtara.
Dị ka emebere ya, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe ọganihu ụbọchị ngosi otu ụbọchị iji zere ịdaba ...
OnePlus '5G ekwentị izizi nwere ụbọchị mwepụta
Chọpụta ihe banyere ụbọchị OnePlus na-ebupụta ekwentị 5G mbụ ya na Europe. Dị ahụ ga-abụ nke mbụ na ahịa.
Meizu na-akọwa ihe kpatara na ọ gaghị ewepụta ekwentị 5G n'afọ ọzọ
Meizu na-akọwa ihe kpatara na ọ gaghị ewepụta ọdụ nwere ike ịkwado netwọkụ 5G n'afọ ọzọ. Mara nkọwa nke nkwenye ọhụrụ a.
Oukitel U23: agba agba na grajentị na azụ
Ọkọlọtọ ọhụrụ nke Oukitel bụ U23, ọnụ nke na-apụ apụ maka ọkwa na gradient agba na azụ ya.
AnTuTu na-ekpughe isi nkọwa nke Honor Magic 2, na-esote njedebe dị elu maka ịmalite
Nkọwapụta teknụzụ nke Honor Magic 2 abanyela na AnTuTu n'oge na-adịbeghị anya. Mụta maka njirimara nke usoro njedebe ọzọ a.
Esi lelee FC Barcelona na Real Madrid na ekwentị gị
Anyị na-egosi gị otu esi ekiri FC Barcelona na Real Madrid nke a ga-egwu taa October 28 na 16: 15 site na Bein Sport.
Xlọ ahịa Xiaomi mbụ dị na UK enweela ụbọchị mmeghe
Xlọ ahịa Xiaomi dị na UK ga-emeghe na November 10. Chọpụta ihe banyere ụlọ ahịa mbụ nke akara ndị China na mba ahụ.
Egwuregwu Survival, egwuregwu ọhụrụ nke Xiaomi n'ụdị PUBG Mobile na Fortnite
Ihe dị ọhụrụ na Xiaomi: Egwuregwu Egwuregwu, egwuregwu nke na-eche ihu PUBG na Fortnite ma nye ụlọ ọrụ China ọhụụ ọhụrụ.
Huawei ekwuputaghi akara DXOMark nke Mate 20 n'ihi na ha di elu
E gosipụtaghị ọtụtụ DXOMark nke Huawei's Mate 20 ka ha dị elu. Mụta nkọwa ndị ọzọ.
Oppo A7: leaked mmefu ego mmefu ego ufọt ufọt nso bụ nso
Atụmatụ Oppo A7, ụdịdị, ọnụahịa, na nnweta adabala ọzọ. Mụta ihe niile banyere nke a na-esote ngwaọrụ.
Nke a bụ otu esi kọwaa Samsung's folding mobile
Samsung achọghị ịhapụ ihe ọ bụla na pipeline yana ya na-arụ ọrụ ọhụụ ọ na-aga maka ihe niile. Anyị maara ụfọdụ nkọwa ọhụrụ banyere ya.
Nkọwa nke OnePlus 6T
Dị ka ọ dị na mbụ, ụbọchị ole na ole tupu ngosipụta ihe ngosi nke ọhụrụ OnePlus, 6T n'oge a, akọwapụtalarị nkọwa niile.
iPhone Xr: ndị a bụ ụzọ ndị ọzọ kachasị mma ị nwere ike ịchọta
Mwekota na uzo ozo di nma nke iPhone XR nke ichotara n'ahịa maka onu ahia yiri ya.
Ekwentị ọzọ ga - abịa na 10 GB nke RAM, ọ bụkwa Nubia Red Magic 2
Kwenyesiri ike: Red Magic 2 si Nubia ga-abata na ikike nke 10 GB nke RAM. Anyị na-enye gị nkọwa nke akụkọ a.
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe Xiaomi iji ruo 100 nde ekwentị rere?
Xiaomi ruru 100 nde ekwentị rere n'ụwa niile. Chọpụta ihe banyere ahịa nke akara ndị China n'ụwa niile.
Samsung Galaxy S10 na Huawei P30 ga-abịa na ụdị 12GB RAM
Thedị ndị kachasị elu nke Samsung Galaxy S10 na-abịa na Huawei P30 ga-enwe 12 GB nke RAM. Chọpụta!
Nyere aka na Google Assistant na Yoigo
Ozi ọma maka ndị ọrụ Google Assistant. Ma ọ bụ na Yoigo ka kwuputara na ọrụ ya adabaalarị na Google Assistant.
BestCrypt Explorer na-enye gị ohere izochi faịlụ na onyogho na ogwe aka echedoro
Nchekwa nchekwa nke Samsung Galaxy bụ otu ọrụ kachasị mma ịnwe "sistemụ arụmọrụ" n'ime ...
Ntị maka ncheta Samsung ọhụrụ maka mobiles ha na nchekwa UFS 3.0
Samsung ka kwupụtara ncheta ọhụrụ ya maka RAM na nchekwa ga-abata na 2020 na 2019 n'otu n'otu na njedebe dị elu.
MediaTek Helio P70: Ihe nhazi ohuru na ọgụgụ isi
MediaTek Helio P70: Ihe nhazi ohuru site na MediaTek. Choputa ihe banyere ihe mmeputa ohuru nke ika China eweputara taa.
Snapdragon 675: usoro nhazi ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ dị ebe a
Snapdragon 675 bụ nke gọọmentị. Mụta ihe niile gbasara sistemụ ọhụrụ a sitere na ụlọ ọrụ America nke Qualcomm, nke ga-abata n'isi afọ na-abịa.
Samsung Galaxy S10s na Exynos chipsets ga - enwe bọọdụ okirikiri SLP
Samsung Galaxy S10s na ndị na - arụ ọrụ Exynos ga - enwe bọọdụ okirikiri SLP dị n’ime maka ohere. Anyị na-agbasawanye gị!
Egwu kachasị egwu maka Halloween a 2018
A usoro nke egwu Halloween 2018 egwuregwu na-atụ gị ụjọ ma ọ bụ na-aghọtaghị otú ụjọ uche nwere ike isi dị otú ahụ.
Ndepụta nke ọnụ ga-emelite na gam akporo
Versiondị ọhụrụ ọ bụla nke gam akporo na-abụkarị isi ọwụwa maka ọtụtụ ndị na-emepụta ama ama, ọkachasị ...
Akpaka playback nke olu ndetu ga-abịa WhatsApp
N'oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ichefu banyere ịpị otu olu ihe mgbe ọzọ na-akpaghị aka kpọọ ha na WhatsApp. Ọbịbịa dum.
Teknụzụ ọhụrụ na ịtụnanya nke 4 nke Samsung ga - ewepụ ọkwa a n’ahịa
E nwere teknụzụ 4 ga-enwu n'ahịa ahịa ama ama ama na ọkwa wee bụrụ mana nke ndị na-achọ ozi ọma.
Ekpughere aha puru iche nke Xiaomi Black Shark 2
Xiaomi Black Shark 2 nwere aha gọọmentị. Chọpụta aha nke ekwentị ọhụụ nke akara ndị China ga - enwe.
Nsogbu ndị ọzọ na Google Pixel 3 XL: nsogbu na ịmegharị ọtụtụ
Ndị ọrụ nke ekwentị ọhụrụ Google na-akọ nsogbu na Google Pixel 3 na Pixel 3 XL mgbe ha na-eji njikwa ọtụtụ.
Samsung na-akwadebe egwu egwuregwu ya, dị ka akụkọ ọhụrụ si kwuo
Samsung na-arụ ọrụ ma na-akwadebe ekwentị na-abịanụ maka ndị na-egwu egwuregwu nke a ga-eweta na ngwụsị November. Anyị na-agbasawanye gị!
A Nokia 8.1 na-abịa: isi nchoputa leaked site Geekbench
Nokia 8.1 agbaala na Geekbench site na ihe nhazi Snapdragon 710, nke kachasị ọhụrụ nke gam akporo, yana ezigbo RAM. Anyị na-agbasawanye gị!
Honor Watch enweela ụbọchị ngosi
A ga-ewepụta Honor Watch na October 31. Chọpụta ihe banyere ụbọchị a ga-ekpughere Honor Watch na eze.
OPPO Ndị aghụghọ na ama arụmọrụ ya
OPPO ghọgburu na ule arụmọrụ. Chọpụta ihe banyere omume nke ika rụrụ na ya igwe.
LG mebere ihuenyo nke Google Pixel 3
Na-eju anya! Ọ bụ LG, ụlọ ọrụ ndịda South Korea rụpụtara ihuenyo Google Pixel 3. Anyị na-enye gị nkọwa!
Nsogbu mbụ nke Google Pixel 3 XL nwere ihuenyo na ndị ọkà okwu
Nsogbu ndị mbụ na Google Pixel 3 XL apụtaworị. Ọhụrụ emere site na ekwentị Google nwere ihuenyo na okwu okwu.
Huawei Mate 20 Pro na-enweta akara dị elu karịa nke ọ bụla gam akporo na AnTuTu
Huawei Mate 20 Pro agafeela ma nweta ihe karịrị 307K isi na ule AnTuTu, otu n'ime akara ngosi ama ama.
Samsung ga ẹkedori a Galaxy «niile na ihuenyo» na-enweghị notch na n'ihu igwefoto n'okpuru ihuenyo
O doro anya na anyị agaghị ahụ Samsung ekwentị na ọkwa ahụ. Na ndị ọzọ mgbe anyị matara na o nwere ọtụtụ nchọpụta ikike itinye igwefoto n'okpuru ihuenyo.
Nke a bụ otú ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo nke Galaxy S10 si dị iche na ndị ọzọ
Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo nke Samsung Galaxy S10 dị iche na nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eji dị ka Huawei na Mate 20 Pro.
EMUI 9.0 beta dị ugbu a maka ụdị Huawei na Honor itoolu
Huawei ewepụtala EMUI 9.0 dabere na gam akporo 9.0 achịcha na ụdị Huawei na Honor ekwentị. Anyị na-agwa gị ihe ha bụ!
Budata YouTube Beta ugbu a: gbalịa ozi ya tupu onye ọ bụla ọzọ
A mara ọkwa YouTube Beta taa ka anyị nwee ike ibudata ụdị beta mbụ nke usoro vidiyo a kacha mma.
Ihuenyo OLED nke Pixel 3 XL mere Samsung
Ihuenyo anyị nwere ike ịchọta na ọhụrụ Pixel 3XL site na ụlọ ọrụ Samsung kama LG dị ka afọ gara aga
Ekwentị 10 kachasị ike nke Septemba 2018, Dabere na AnTuTu Benchmark
Debe Huawei Mate 20 na oroma ma nweta Huawei Watch GT n'efu
Huawei Mate 20 dị na oroma yana Huawei Watch GT dị ka onyinye. Chọpụta nkwalite a na oroma ruo Ọktọba 31.
Huawei Mate 20 na Mate 20 Pro megide asọmpi ahụ
Mgbe ọtụtụ ọnwa nke asịrị gasịrị, nke a na-ahụkarị mgbe anyị na-ekwu maka njedebe dị elu, ụlọ ọrụ Asia ewepụtala ihe di iche iche nke Mate 20. Na Androidsis anyị jiri ya tụnyere ndị ọzọ nhọrọ dị elu na ahịa.
Xiaomi Mi Mix 3 enweela ụbọchị ngosi
Oge ngosi nke Xiaomi Mi Mix 3 bụ onye ọrụ. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke ọkwa a dị elu nke akara ndị China.
Huawei mara ọkwa 9 Plus na Plus Max mara ọkwa: atụmatụ, nkọwa na ọnụahịa
Huawei ekwuputala Huawei Enjoy 9 Plus na Enwe Max, ọhụụ abụọ dị n'etiti etiti. Mara nkọwa na ọnụahịa ha.